‘अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्काउन करिब ७ खर्ब रुपैयाँको स्रोत आवश्यक पर्छ’ | Ratopati
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसँगको अन्तरवार्ता
personरातोपाटी exploreकाठमाडौं access_timeमाघ १९, २०७७ chat_bubble_outline0
सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीको सम्परीक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षडा. पुष्पराज कँडेलले बताएका छन् । खर्च प्रणाली र ऐन नियमको पुनरवलोकन नगर्ने हो भने विकासको गति अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि नबढ्ने पनि उनले बताए ।न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष कँडेलले विभिन्न परियोजनाहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कन पनि सुरु गरिसकेको बताए । यस्तै नेपाल सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा पुग्ने लक्ष्य लिएकोमा कोभिडका कारण सन् २०२७ मा मात्रै पूर्णरूपमा जान सक्ने बताएका छन् । प्रस्तुत छ, आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसँगको कुराकानी :
राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले अनुगमनका कामलाई अगाडि बढाइराखेको छ । यो वर्ष विभिन्न १२ वटा परियोजनाको आन्तरिक मूल्याङ्कन हामी आफैले गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि त्रिशूली– गल्छी– मैलुङ सडकको ग-यौं । त्यस्तै उदयपुर सिमेन्ट, जनता आवास कार्यक्रम लगायतका १२ वटा कार्यक्रम र परियोजनाको मूल्याङ्कन गर्ने काम राखेका छौँ । यो पुस र माघमा आयोगका माननीय सदस्यहरू र यहाँको टिम परिचालित भएको स्थिति छ । अस्ति भर्खरै हामीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक ग¥यौं । आयोगका अन्य नियमित काम पनि चलिराखेको छ । अध्ययनका काम चलिराखेका छन् । मानव विकास प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक ग-यौँ । त्यस्तै अन्य अध्ययनका काम पनि हामी गर्दैछौँ ।
त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ । १५औँ योजनाले जुन प्राथमिकता तोकेको छ, जहाँजहाँ लगानी गर्ने भनेको छ र जसलाई जोड दिने भनेको छ त्यसमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । किनभने हामीले पन्ध्रौँ योजनाको निर्माण गर्दा संविधानको मूल मर्मलाई समेटेर गरेका छौँ । अब संविधान नै परिवर्तन गर्नतिर, नीति नै परिवर्तन गर्नतिर जाने हो भने एउटा चिज भयो । राज्यको नीति त्यही नै भयो र राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका, निजी क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका र अरू अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकामा खासै परिवर्तन नआएको हुनाले पन्ध्रौँ योजनाको मार्गनिर्देशनमा त्यति परिवर्तन गर्नुपर्ने म देख्दिनँ । पन्ध्रौँ योजनाले सामाजिक क्षेत्रलाई अलि जोड दिनुपर्ने स्थिति थियो र कोरोनाले पनि त्यसलाई बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता दियो । पन्ध्रौँ योजनाले आईटी क्षेत्र अर्थात् डिजिटल क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ भनेको थियो । अहिले त्यहीअनुसार जानुपर्ने स्थिति छ । सेवा क्षेत्रलाई पनि अलि जोड दिएको थियो । त्यसलाई पनि दिएकै छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कुरालाई पनि जोड दिएकै थियो । कोरोनापछि पनि हामीलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती त छ नै । त्यसैले नीतिगत रूपमा त्यति धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने म देख्दिनँ । तर लक्ष्यहरू हामीले जुन आशाका साथ तोकेका थियौँ त्यसमा सङ्कुचन आउने स्थिति देखिन्छ । पन्ध्रौँ योजनालाई मध्यावधि समीक्षा पनि गर्ने कुरा उठिराखेको छ । निर्णय त भइसकेको छैन । त्यसलाई अलिकति रिभ्यु गरेर लैजानुपर्ने, कोरोनाको स्थिति पनि त्यतिबेरसम्म केही न केही अझै समान्य अवस्थामा जाला भन्ने आशा गरौँ । त्यो हिसाबले केही परिमार्जन गर्नुप¥यो भने हामी गर्छौं ।
बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्दै विकाससँग सम्बन्धित देखिएका तात्कालीन समस्या, अब नीति परिवर्तन त्यहाँबाट हुँदैन यो योजना डकुमेन्ट र बजेट डकुमेन्टले गर्नुप¥यो तर तात्कालीन समस्या समाधान गर्ने र कसरी जाने भन्ने कुरामा प्राविधिक समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र त्यसका उपाय दिने काम विकास समस्या समाधान समितिले गर्ने हो । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट २० वटा समस्या, एजेन्डा हामीले दिएका थियौँ । जस्तै डिजिटल नेपाललाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बेरुजु फछ्र्यौटका कुरालाई क्रियाशीलता दिनेजस्तै शिक्षासँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु बाँकी रहेछन् ती पुराना बेरुजुलाई छिटो फछ्र्यौट भन्ने खालको, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही समस्या रहेछन् जस्तो विदेशमा घरजग्गा किन्ने र बनाउने समस्या रहेछ । त्यसलाई सहजता बनाउने भन्ने छ । त्यस्तै वैदेशिक सम्झौता भएका कुरामा कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भनेर समीक्षा गर्ने परिपाटी रहेनेछ त्यसलाई पनि नियमित रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडकहरू निर्माणको सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेको देखिन्छ । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने लगायतका २० वटा समस्या प्रस्तुत ग¥यौँ । जसलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशहरूबाट केही समस्या उठान भएर आएका छन् तिनलाई पनि समाधान गर्ने हिसाबले तयारी गर्दैछौँ । त्यहाँ मन्त्रीहरूले बोल्नुभयो । स्थानीय तहका केन्द्रीय सङ्घहरूबाट २ जना आउनुभएको थियो । उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो । अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदाखेरी अहिलेसम्म हामी निराशाजनक स्थितिमा छैनौँ, अब अहिले निर्वाचनको अवस्था आएको छ । निर्वाचनको लागि तपाईंहरूले तयारी गरिनै हाल्नुहुन्छ । तर निर्वाचनको कारणले गर्दा विकासको काममा कमी भयो भन्नेकुरा नआओस् । तपाईहरूले आफ्नो विकाससम्बन्धी कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने काम गर्नुहोला । निरास हुनुपर्ने स्थिति छैन । हिजो जसरी जानुभएको थियो त्यसैगरी नै चल्नुस् भन्ने नै उहाँको निर्देशनको मूल कुरा नै त्यही हो ।
हो, यसमा काम गर्दैछौँ । त्यसको मूल ठाउँ नै राष्ट्रिय योजना आयोग हो । त्यसमा १२ देखि १५औँ योजनासम्म हामी विकासशील राष्ट्रमा जाने भनेर दीर्घकालीन सोच भनेर राखेका छौँ । अहिले पनि हामीले त्यही राखेका छौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रावधानमा विकासशील राष्ट्रमा पुग्ने तीनवटा मापदण्ड छन् । एउटा सम्पत्ति सूचकाङ्क, अर्को प्रतिव्यक्ति आय र जोखिम सूचकाङ्क छन् । यी तीनवटा सूचकाङ्कमध्ये दुईवटा सूचकाङ्क लगातार दुई पटक पास भयो भनेदेखि विकासशीलमा जान सक्ने भन्ने छ । हामी दुई पटक १५ को रिभ्यु र १८ को रिभ्युमा पहिल्यै पास भइसकेका हौ । १८ को रिभ्युमा भूकम्पको कारणले केही थाँती राख्यौँ तर यो साल तेस्रो पटक हामी पास भइसक्यौँ । हाम्रो पास नभएको भनेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको क्राइटेरिया हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको क्राइटेरिया संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मापदण्डअनुसार १२ सय २२ प्रतिव्यक्ति डलर हुनुपर्ने भन्ने छ । हाम्रो पछिल्लो तथ्याङ्क प्रतिव्यक्ति १ हजार २७ डलर रहेको छ । तर त्यो २०१८ मा ७ सय ४५ डलर रहेको थियो । अहिले १ हजार २७ भएको छ १२ सय २२ पुगेन । अरू दुईवटा सम्पत्ति सूचकाङ्कमा पनि ६६ न्यूनतम चाहिनेमा हामी ७५ पुगेका छौँ । आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा हामी २४ मा आइपुगेका छौँ । भनेपछि जोखिम पनि घटेको स्थिति देखिन्छ । हामीले विकासशील राष्ट्रमा जाने भनेर नै निर्णय गरेका हौँ । तर कोभिडले केही समस्या ल्यायो । त्यसैले त्यहाँ पुग्ने हो कि नपुग्ने हो भनेर आम जनतामा प्रश्न उठेको छ । तर पनि कोभिडको यो अवस्था सधैँ रहँदैन र ५ वर्षको ग्रेस पिरियड प्राप्त गरेर जाँदा हुन्छ भन्ने निष्कर्ष भएको छ । त्यहीअनुसार नै हामीले सोच राखेका छौँ । त्यो हिसाबले हेर्नेहो भने हामी २०२२ मा भनेका छौँ तर २०२७ मा हामी पूर्ण रूपमा विकासशीलमा जाने हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि जे अहिले छ, त्यहीअनुसार हुने हो ।